Bilowga Caafimaadka ee Kellogg | JPMA, Inc.
Cadaadis badan ayaa ka timaadaa waalid ahaan waxaanan si fudud uga walwali karnaa sidii aan isku dayeyno inaanu "saxneyn". Ka warran waxa, ma jiro wax! Sidaa u hubso inaad u dabaaldegto oo aad naftaada u qaddariso dhammaan guushaas yar oo aad ku raaxeysan doonto sida qoyskaaga koraya! Dhamaadka maalinta waxaay ogaaneysaa waxa adiga iyo qoyskaaga aad u fiican tahay.
Dalagga soo socda ayaa ah nooca ugu caansan ee laga helo barnaamijka WIC. Laakiin maskaxda ku hay, ma aha alaabooyinka iyo qiyaasaha oo dhan ayaa loo ogol yahay barnaamij kasta oo WIC ah. Hubso inaad ku baarto skaankaaga mashiinkaaga 'WICShopper scanner' si aad u xaqiijiso inay adiga kugu habboon tahay!
Waxaan sidoo kale isla meel dhignay Qaar ka mid ah jimicsi, siyaabo sicir ah oo waxtar leh si aad u jajabiso habka aad uga bixi karto habka caadiga ah ee wax lagu karinayo
Bilowga Caafimaadka Caafimaadka Kellogg
Gacmaha ayaad buuxisay. Kellogg's waxay samaysay degel dhan oo leh talooyin iyo figrado si nafaqada wanaagsan ugu hayso meesha ugu sareysa liiska carruurtaada.
Booqo bogga Caafimaadka ee Bilowga
Meelaha fudfudud oo fudud iyo fudud
Xasaasiyad laba daqiiqadood ah
Cagaarka Beerka leh ee Beer-duban
Qalab yar oo qaali ah
Ku tuur koob hadhuudh ah ama jajabi ah bariis qadar yar oo saliid ah iyo xoogaa yar oo ah xawaash. Iskuday xilliyada Talyaani salad salad ah. Wixii shey laad laad koonfur-galbeed ah, iskuday isku dar ah oregano, budada basbaaska, iyo cumin. Faahfaahinta cuntada iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Cunto-qulqulo kuleyl ah
Lakab aan lahayn shiil
Way fududahay, jajabka jajabka ee hadhuudhka la jajabiyey iyo xawaashka aad ugu jeceshahay. Ka dib, ku dhex dar digaaga ama kalluunka ukunta sida khafiifka ah u garaacday kuna duub dahaadhka dalagga. Dubo ilaa intaad karsanayso iyo ka dhig. Ku raaxayso! Faahfaahinta cuntada iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Soo dhawow dareenkaaga adiga oo isticmaalaya isku-dhafka firileyda leh ee dhadhanka Latin
Avocado la jarjarey ayaa ka dhigaya dalag badan oo sarreen ah. Haa, waad maqashay midig, avokado! Jajabka sare ee hadhuudhka leh xoogaa dollops ah oo caano fadhi ah, ku dar avocado la jarjaray ka dibna ku dhammee qashin budada basbaaska ah ama cayenne haddii aad rabto wax yar oo kuleyl ah. Buuxintaan, macaan iyo macaan isku dhafan waxay u dhadhameysaa cunno kasta. Wixii fikrado kale oo isku dhafan, cuntooyinka, iyo macluumaadka nafaqada, booqo: healthbeginnings.com.
Macluumaadka faahfaahsan ee cuntada iyo nafaqada, booqo Healthbeginnings.com.
Isku qas oo u cayaar nafaqada aad rabto iyo dhadhanka aad jeceshahay
Jacayl ka samee dalagyada dhirta iyo raadinta inaad ku darto fibriyo dheeraad ah cuntadaada? Isku dar dufanada hadhuudhka ah iyo duufaanta digaaga si aad u hesho dheelitirka saxda ah ee dhadhanka iyo nafaqada aad raadineyso
Khiyaano degdeg ah oo ka dhiga dibedda weyn ee Faransiiska ah ee dibedda ka soo baxa kuna jilicsan gudaha
Markaad samaynayso rooti faransiis ah, ku dar talaabada sahlan ee lagu daadanayo xaleefyada dufanka hadhuudhka la jajabiyey ka dib markaad ku dhex shubtay ukuntaada. Si dhakhso ah ugu wareeji digsigaaga si aad u karisid ilaa ay ka baxaan oo qallajiyaan dibedda.
Ku dhiirigeli caafimaadka dheefshiidka cuntada aad jeceshahay
Hilib culus oo qafiif ah ama chili leh koob ama laba jajab oo jajab ah ama qamadi la shiilay oo la galiyay qaboojiyaha ama digsiga gaabiska ah. Faahfaahinta cuntada iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Waxaanu hagaajineynay geeddi-socodka samaynta horchata-halkii bariiskii bariiska, waxaanu ku darnay badarka bariiska si fudud, smoothie-macaan-macaan.
Waa mid kulul, oo caan ku ah quraacda daqiiqadaha
Dub oo qabooji qaybo ka mid ah muufada quraacda dhammaadka wiigga adoo adeegsanaya firileyda firileyda badan leh sida qamadiga la shiilay ee barafaysan ama jajabka buunshaha Subax kasta, ku nadiifi muufka microwave-ka 20 ilbidhiqsi markiiba illaa diirimaad iyo jilicsanaan. Kadib, muufka kala badh oo buuxi subagga looska iyo xaleef muus ah, jeex digaag turkey iyo jiis ah, ama taabasho miraha kaydi. Faahfaahinta cuntada iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Rice iyo Tuna Casserole
Xirmooyinka Kalluunka ee Crunchy Fish
Ku darso kalluumaysiga kalluunka qafaaran, foornada kalluunka lagu dubo ee leh citrus, salsa ama maraqa tartar tartiib tartiib ah.
Qashinka Digaaga Doogga ah
Samee hilib dheeraad ah
Burburi badarka bariiska oo ku qas kalluunka qasacadaysan ama turkeyga dhulka si aad ugu darsato muuqaal weyn kalluunka iyo kubbadaha hilibka dhadhanka leh. Cunnooyinka hilibka leh sida hilibka lo'da, isku day inaad ku darto jajabka qamadiga ee la jajabiyey ama qamadiga la shiilay ee qabow si aad ugu darto xoogaa fiber ah hilibka hilibka iyo taabashada macaanka Faahfaahinta cuntada iyo macluumaadka nafaqada, booqo healthbeginnings.com.
Qosolkani waa mid cajiib leh fasax sabti ah ama casho qoys. Kaliya ku dar salaatada la gawraco iyo duuduubka qashinka oo dhan si aad u hesho cunto dhamaystiran.
Crunchy oo la yiraahdo Chili-Mac Skillet
Iskudhicii macaan ama dheelitiran ee kudhaca
Isticmaal juuska hadhuudhka ah ee la jajabiyey ama bariis isku qasan oo la taabtay jiiska Parmesan si ay u sareeyaan maqaarka halkii ay ka buuxsan lahaayeen eeyaha rootiga. Cuntada la jajabiyey oo qallajiyey dhadhanka qamriga leh iyo taabashada sonkorta brown si ay ugu daboosho tufaaxa duban, fersken, ama dawooyinka kale ee kuleylka ah, neefsiga.
Mashiinka Cuntada ee Faytiska
Beerka cagaaran ee Cheesecake
Goobta Dufanka Cuntada ah
Croutons Talyaani ah
Ka ilaali kartid salmon iyo bariis siriyaal oo aad diyaar u tahay in aad sameysatid kuwan si fudud oo loo yaqaan 'salmon pallies' ah oo leh ogeysiis daqiiqad ah.
Beerta Beer Baaskiil
Budada kilyaha iyo basasha waxay ku daraan dhadhan badan oo caan ah kuwaasi oo si sahlan loo beerto. Ku cuna Cuntada ay la socdaan suugaanta picante ama salsa.
Hilib dufan oo dufan leh oo lagu sameeyey turkey iyo bariis jilicsan
Kaararka nolosha ee Kellogg
Burburka nolosha waa siyaabo yar oo nolosheena u sahlan. Talooyinkan yar-yar ee miisaaniyadaha iyo khiyaamooyinka ayaa kaa caawin doona inaad kala-soocdo jadwalkaaga wax-karintaada oo aad abuurto cunto caafimaad leh oo delicious ah qoyskaaga.